JABUUTI - Wasiiradda arrimaha dibadda dalalka Somalia, Eithiopia iyo Eritrea ayaa maanta oo Khamiis ah gaarey Jabuuti, waxaana loo sameeyay soo dhaweyn ballaaran.
Wafuuddan heerka wasiir oo kasoo ambabaxay magaalada Asmara ayaa waxay la kulmayaan Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle, iyagoo isku dayaya inay dhabaha u xaaraan wadahadal dhexmara Jabuuti iyo Eritrea.
Safarka Wasiirada ee Jabuuti ayaa ka dambeeyay markii Madaxweniyaasha Eritrea iyo Somalia oo uu whelinayo Ra'iisul Wasaaraha Eithiopia ay ku kulmeen magaalada Asmara habeenimadii xalay, halkaasoo heshiis is-kaashi dhaqaale ku gaareen.
Kadib Kulankooda, Farmaajo, Afwerki iyo Abiy Axmed ayaa dhisay gudi heer wasiirro ah, oo ka kooban Axmed Ciise Cawad, Wasiirka arrimaha dibadda Somalia, dhigiisa Eritrea Cismaan Saalax iyo kan Eithiopia Workneh Gebeyehu.
Wasiiradda ayaa la filayaa in kulankooda Ismaaciil Cumar Geelle ugu gudbiyaan fariinta madaxda ku kulantay Asmara, waxaana wararku ay sheegayaan inay ka shaqeynayaan wadahadal dhex-mara Jabuuti iyo Eritrea.
Gudoomiyaha Midowga Africa ayaa ku tilmaamay booqashadii Wasiiradda ee Jabuuti...